March 9, 2011 by chowutyee
Posted in အင်ဒိုနီးရှား ချက်ပြုတ်နည်းများ | 18 Comments
Sunny yay, pls try it… It is not difficult to cook! 😀
တချို့က သကြားရည်လေးနဲ့ တွဲစားတယ် မချော။ အဆင်ပြေရင် လုပ်စားကြည့်ပါနော်… 😀
Wonderful ! Thanks for the recipe 🙂
It is good one.. Plz try it 🙂